Diso izy ireo ... Tsy ampy ny fandefasan-kafatra | Martech Zone
Alarobia, Jona 24, 2015 Alakamisy, Jona 25, 2015 Douglas Karr
Taona vitsivitsy lasa izay dia nanoro hevitra ny olona aho mba tsy hi-tweet tafahoatra. Raha ny marina dia antony lehibe io maninona ny olona no nanaraka anao tao amin'ny Twitter. Mandrosoa haingana taona vitsivitsy ary ny Twitter dia nandeha tamin'ny feon-kira vitsivitsy isan'ora ka hatrany amin'ny fidradradradran'ny autopost, kaonty sandoka, spammers ary vaovao amin'ny hafaingam-pandeha izay tsy azo levonina amin'ny ambaratonga ahazoana aina fotsiny.
Ny tena izy dia, raha manandrana manintona ny saina any amin'ny efitrano mafy ianao, dia mila manandratra ny feonao na mamerina ny tenanao foana. Twitter dia efitrano mafy… mafy be.
Manohy mamaky aho fitsipika mikasika ny Twitter an-tserasera. Mitohy ny famoahana fitsipika momba ny fotoana tsara indrindra handefasana Tweet ary Famoahana mailaka be loatra. Nanapa-kevitra ny hizaha toetra ireo aho fitsipika. Raha ny marina dia tsy nanao fitsapana kely fotsiny aho fa nanapoaka ny Twitter.
Tiako ve ny miantsoantso ao amin'ny efitrano mafy? Tsia. Tiako ve ny mamerina ny tenako? Tsia… Halako tanteraka izany. Ary azoko antoka fa hisy olona hilaza amiko fa ny torohevitra omeko dia hanampy trotraka ny olana fa tsy hanampy amin'ny famahana azy.
Tsy olona toa ahy ny olana. Ny olana dia ny efitrano. Isan'andro nandritra ny taona maro dia nandray anjara mavitrika tamin'ny Twitter aho ary nanandrana nanome lanja, fialamboly, fanampiana ary resaka. Na izany aza, rehefa nandeha ny fotoana, dia reraka tamin'ny Twitter aho. Manokatra ny sakafoko aho ary misy ampahany kely amin'ny resaka misy lanjany.
Saika isan'andro dia manakana ny spammer aho. Rehefa mijery ny pejin'izy ireo aho dia manana hafatra iray miverimberina im-jatony izy ireo. Tena marina, sarotra ve ny hametrahan'ny Twitter sivana amin'ny kaonty hahazoana antoka fa tsy averimberin'izy ireo ny hafatr'izy ireo ?!
Ka, mandra-pahatapahan'ny Twitter hevitra hanao zavatra momba ny kalitao sy ny habetsaky ny fampahalalam-baovao zaraina amin'ny alàlan'ny Twitter, dia nanapa-kevitra ny handrava izany aho fitsipika an'ny mpiara-miasa amiko amin'ny media sosialy. Oh… ary nandaitra.
Fandefasana isaky ny ora, 24 ora isan'andro
Nampahafantatra ahy tamin'ny plugin WordPress lehibe antsoina hoe: Havaozin'ny Old Post. Na dia misy aza ny kinova maimaim-poana, dia tiako indrindra ny handoavana ireo fiasa fanampiny tafiditra ao amin'ilay kinova Pro tsy mampino. Ny kinova dia manana endrika tonina bebe kokoa ary manatsara ny fahaizana manosika ny atiny miaraka amin'ny sary asongadina mivantana avy amin'ny WordPress. Ny plugin dia mamela ihany koa Bit.ly fampidirana mba hahafahanao mandrefy ny tahan'ny tsindry avy amin'ny rohy zaraina.
Ity misy ohatra iray amin'ny fisehoan'ny karatra Twitter
Zahao ny tranokalanay vaovao… sy ireo loharano vaovao http://t.co/UWExub2Dy7 #atiny #wordpress pic.twitter.com/MHVgN5zIY6
- Teknolojia marketing (@martech_zone) Jona 24, 2015
Nametraka ny plugin aho mba handefasana atiny tsy ampoizina ao anatin'ny taona lasa isaky ny ora ao amin'ny Twitter. Raha nandefa fanavaozana 2 hatramin'ny 4 isan'andro aho, dia namoaka 24 ka hatramin'ny 30 isan'andro. Amin'izany tabataba be izany dia heverinao fa ho very ny mpanara-dia ahy rehetra ary hitondra ny fifandraisako anaty tanky. Tsia.
Ny valin'ny fandefasana mailaka be loatra
Tsy mandainga ny statistika ary milaza amiko ny Twitter Analytics ary ny Google Analytics an'ny tranokalako fa hetsika nahafinaritra izany! Ity misy fiatoana:
Taham-pifandraisana Manomboka amin'ny 0.5% ka hatramin'ny 2.1%!
Tweet Hevitra UP 159.5% ka hatramin'ny 322,000.
Fitsidihana profil UP 45.6% ka hatramin'ny 2,080.
Followers UP 216 hatramin'ny 42,600.
retweets UP 105.0% ka hatramin'ny 900.
Bitsika mampifandray aminao UP 34.3% ka hatramin'ny 6,352.
Fifamoivoizana avy amin'ny Twitter UP 238.7% hatramin'ny fitsidihana 1,952.
Tsy azoko antoka hoe ahoana no ahafahako miady hevitra amin'ireo statistika ireo. Tsy namoy mpanaraka aho fa nahazo mpanaraka. Tsy namoy ny foko aho, fa avo efatra heny. Tsy very ny fitsidihan'ny tranonkala aho, fa nitombo avo roa heny izy ireo. Ny metrika tokana dia manondro ny zava-misy fa, tamin'ny fampitomboana betsaka ireo bitsika navoaka, dia nanatsara ny zava-bitako tamin'ny Twitter aho.
Nahoana? Toa mazava tsara fa, tsy hoe tsy manelingelina ireo mpanaraka ahy ankehitriny fotsiny aho, fa hita bebe kokoa ireo bitsika nataoko, avoaka kokoa ny fikitika, ary tsindriana bebe kokoa. Raha hanao fampitahana aho dia mety ho eny amoron-dàlana ianao no mizotra amin'ny fifamoivoizana ary ny bitsika dia takela-by. Ny vitan'ny fifamoivoizana mahita ny takelakao dia somary manify. fa raha azonao atao ny mametraka takelaka isaky ny iray kilaometatra, dia tsara lavitra noho izany ny mety ho hita.
Aza mihaino ahy!
Aza miantehitra amin'ny ohatra nomeko mba hampiakarana ny tabanao ao amin'ny Twitter fotsiny. Tadidio fa mizara karatra Twitter amin'ny atiny soatoavina matetika fotsiny aho. Tsy hatahotra ny hizara ilay sioka marina ihany koa aho mihoatra ny indray mandeha isan'andro. Ny mety dia tsy ho hitan'ny mpanaraka anao azy mihoatra ny indray mandeha. Andramo avo roa heny ny tahan'ny famoahana Twitter anao ary jereo ny fiatraikany amin'ny anao Analytics. Raha mandeha izy dia andramo avo roa heny izany. Ampahafantaro ahy ny fandehany amin'ireo fanehoan-kevitra.
Disclosure: My Havaozin'ny Old Post rohy dia rohy mpiara-miasa. Tiako be ilay izy ka avy hatrany dia nanao sonia hiara-miasa amin'izy ireo.
Tags: autoposthamelombelona ny lahatsoratra talohavelomy ny pro talohafandaharam-potoana wordpress sosialyfampidirana wordpress sosialyTwitterwordpress sosialy
Jolay 5, 2015 amin'ny 11:45 PM
Nanova ny fomba fifandraisan'ny olona amin'izao andro maoderina izao ny Twitter sy Facebook…